कसरी मिश्रित व्हिस्की बनाउने-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
कसरी मिश्रित व्हिस्की बनाउने
जब समय आउँछ, हामीले स्लीपिङ बेलबाट ओक ब्यारेलमा व्हिस्की जगाउनु पर्छ। र मिश्रणको अर्को चरणमा जानुहोस्। मानिसहरूले 19 औं शताब्दीको मध्यमा मिश्रित व्हिस्की आविष्कार गरे। त्यतिबेला व्हिस्कीको गुणस्तर असमान थियो। यो टाउको दुखाइको समाधान गर्न, स्कटल्याण्डको ग्लेनलिभेट डिस्टिलरीमा काम गर्ने एन्ड्रयू अशरले स्वादलाई थप समन्वय र सन्तुलित बनाउन धेरै व्हिस्कीहरू एकसाथ मिलाउने विचार गरेका थिए। आज, मिश्रित व्हिस्कीले विश्वव्यापी व्हिस्की बजारको 90% को लागि स्थिर रूपमा योगदान गरेको छ।
किन व्हिस्की मिश्रण गर्न आवश्यक छ?
डिस्टिलरीको अस्तित्व व्हिस्की मिश्रण प्रविधिमा निर्भर गर्दछ। प्रत्येक ब्यारेल एकै समयमा भरिए पनि, ती सबै एउटै डिस्टिलरीबाट आउँछन् र एउटै तहखानेमा परिपक्व हुन्छन्। परिणामस्वरूप व्हिस्की विभिन्न रंग र स्वाद संग अद्वितीय छ। डिस्टिलरीका लागि हरेक वर्ष उस्तै स्वादका उत्पादनहरू उपलब्ध गराउन सजिलो छैन। ब्लेन्डिङ व्हिस्की, जुन ब्रान्ड उत्पादनहरूको स्थिरता र स्थिरता राख्न सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
व्हिस्की कसरी मिश्रण गर्न सकिन्छ?
व्हिस्की बारटेन्डरले पहिले धेरै ब्यारेलहरूबाट (दुई देखि एक सयसम्म फरक) मिलाउनको लागि व्हिस्की छनोट गर्नेछ, र त्यसपछि ब्यारेलमा रहेको व्हिस्कीलाई स्टेनलेस स्टीलको ट्याङ्कीमा ल्याउनुहोस् र एकै समयमा मिलाउनुहोस्। मिश्रित व्हिस्की कहिलेकाहीँ फेरि ब्यारेलमा राखिन्छ, समय धेरै हप्ता वा महिनाहरू चाहिन्छ। यसको उद्देश्य व्हिस्की रक्सीलाई अझ बलियो सुगन्धको साथ थप सामंजस्यपूर्ण बनाउनु हो।
मिश्रित व्हिस्की संगीत रचना जस्तै हो। विभिन्न ब्यारेलबाट व्हिस्कीले विभिन्न नोटहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। जबसम्म तिनीहरू राम्ररी व्यवस्थित छन्, तपाईंले मनमोहक भण्डार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। संगीत रचनाको जटिलता यो हो कि यी व्हिस्कीहरूले हजारौं प्रकारहरूसँग सामना गर्न सक्छन्, र स्वाद वर्ष देखि वर्ष फरक हुन्छ। बारटेन्डरहरू लगनशील कमिलाहरू जस्तै हुनुपर्छ, जुनसुकै समयमा स्वादको प्रत्येक सूक्ष्म परिवर्तनमा ध्यान दिई, ब्रान्डको सुसंगत विशेषताहरू र गुणस्तर राख्न प्रत्येक वर्षको स्वाद र रंगमा उत्पादनहरू समान छन् भनी सुनिश्चित गर्न।
अघिल्लो: व्हिस्की को बोतल
अर्को: केही रोचक व्हिस्की कथा ---- टावरको कथा